July 31, 2019 Cele Love 0
နင် ငါချစ်နေတာကိုဘာလို့ ယောကျာ်းယူသွားတာလဲ…ဟုပြောပြီးသားမယား ပြုကျင့်မှု
နင် ငါချစ်နေတာကိုဘာလို့ ယောကျာ်းယူသွားတာလဲ…ဟုပြောပြီးသားမယား ပြုကျင့်မှု ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့ ၌ မုဒိန်ိးမှုကျုးလွန်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူအား( ၁၄ ) ရက်အကြာ ၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ် …။ ၂၀၁၉ ခု ဇူလိုင် ၃၁ ရက် ယနေ့ မွန်းလွဲ […]
(၄)နှစ်သမီးလေးရဲ့ မအင်္ဂါထဲကို မျှော့ဝင်ခဲ့ပုံကို မိဘများဆင်ခြင်ဖို့၊ ပြန်လည်ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့မိခင်
(၄)နှစ်သမီးလေးရဲ့ မအင်္ဂါထဲကို မျှော့ဝင်ခဲ့ပုံကို မိဘများဆင်ခြင်ဖို့၊ ပြန်လည်ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့မိခင် ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးဟာ သူမ သမီးရဲ့အဖြစ်ကို အခြားမိဘများဆင်ခြင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ပြန်လည် အသိပညာပေး ဖြန့်ဝေမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သူမရဲ့သမီးမှာ အသက်(၄)နှစ်သာရှိသေးပြီး၊ မအင်္ဂါထဲကို ဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် …။ မိုးရာသီမှာ ခြင်နဲ့ […]
လျော့တွဲနေတဲ့ရင်သားတွေကို ပြန်လည်ကျစ်လစ်လှပလာစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၅)ချက်
လျော့တွဲနေတဲ့ရင်သားတွေကို ပြန်လည်ကျစ်လစ်လှပလာစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၅)ချက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ၊ ဝိတ်ချလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ပျိုမေတို့ ရင်သားတွေပါမကျစ်လစ်တော့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အခုဖော်ပြမယ့်အချက်လေးတွေကို လိုက်နာပေးလိုက်ရုံနဲ့ ပုံစံကျပြီး ကျစ်လစ်လှပတဲ့ရင်သားလေးတွေကို သေချာပေါက်ပြန်ပြီးပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ် နော် …. (၁) ကိုယ်နေဟန်ထားမှန်အောင်နေပါ နောက်ကျောနဲ့ခါးကို ဆန့်ပြီး ကိုယ်နေဟန်ထားမှန်အောင်နေတာက ပျိုမေတို့ရင်သားကို ပြန်ပြီးတင်းရင်းအောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ […]
နောင် ၁၀ နှစ်မှာ ရွယ်တူတွေအားလုံးထက် လုံးဝကိုနုပျိုနေစေမယ့် မအိုဆေးလျှို့ဝှက်ချက် (၈) ခု
နောင် ၁၀ နှစ်မှာ ရွယ်တူတွေအားလုံးထက် လုံးဝကိုနုပျိုနေစေမယ့် မအိုဆေးလျှို့ဝှက်ချက် (၈) ခု အလှအပဆိုတာ မျိုးရိုးနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အနေအထိုင် အပြုအမူတွေနဲ့ပါ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းလှချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် လှစေမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုတော့ လိုက်နာနိုင်တဲ့သူနည်းပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ နောင် ၁၀ အကြာမှာ သူများနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် နုပျိုနေစေမယ့် မအိုဆေးလျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လိုက်လုပ်တဲ့သူကတော့ […]
ကားနောက်ကနေ ခိုးတဲ့သူခိုး နောက်ကားက ဟွန်းတီးပြီး သတိပေးလိုက်သောအခါ (ရုပ်သံ)
ကားနောက်ကနေ ခိုးတဲ့သူခိုး နောက်ကားက ဟွန်းတီးပြီး သတိပေးလိုက်သောအခါ (ရုပ်သံ) ကြည့်မြင်တိုင် နတ်စင်လမ်းမှာ ဖြစ်သွားခဲ့တာလို့ သိရပါတယ် …။ ကားနောက်ကနေ လိုက်တက်ပြီး ကားပေါ်ကပစ္စည်းကို ခိုးယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သူခိုးပါ …။ မီးပွိုင့်လိုနေရာမျိုးမှာ ကားရပ်တဲ့အချိန် ပစ္စည်းကိုဆွဲချပြီး ခိုးဖို့ ကြိုးစားနေတုန်း နောက်က ပါလာတဲ့ […]
ချွေးပေါက်ကျယ်တွေကို တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားစေမယ့် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း(၅)မျိုး
ချွေးပေါက်ကျယ်တွေကို တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားစေမယ့် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း(၅)မျိုး ပျိုမေတို့ မျက်နှာလေးမှာ ချွေးပေါက်ကျယ်တွေရှိနေရင် အဆီပိုပြန်ပြီး ဝက်ခြံနဲ့အဖုတွေလည်းပိုဖြစ်လွယ်တာကြောင့် အသားအရေပျက်စီးမှုကိုပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ချွေးပေါက်ကျယ်တွေက အသားအရေထိန်းသိမ်းရတာ ခက်ခဲမှုဖြစ်စေသလို၊ မိတ်ကပ်လိမ်းရတာလည်း အဆင်မပြေစေပါဘူး။ ဒါကြောင့် မျက်နှာမှာချွေးပေါက်ကျယ်တွေရှိတဲ့ပျိုမေတို့အတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ အိမ်တွင်းမျက်နှာပေါင်းတင်နည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ် နော် …။ (၁) ငှက်ပျောသီးနဲ့အုတ်ဂျုံ ငှက်ပျောသီးမှည့်တစ်လုံး၊အုတ်ဂျုံတစ်ဇွန်း၊ပျားရည်နှစ်ဇွန်းတို့ကိုရောပြီး […]
မြေးဖြစ်သူ ကျောင်းသူအား ဓားဖြင့်ထိုးတာကို ဝင်ရောက်ဖျန်ဖြေသည့်အသက်(၈၀)နှစ်အဖွားအိုအားအုတ်ခဲဖြင့်ထုမူ့ဖြစ်ပွား
မြေးဖြစ်သူ ကျောင်းသူအား ဓားဖြင့်ထိုးတာကို ဝင်ရောက်ဖျန်ဖြေသည့်အသက်(၈၀)နှစ်အဖွားအိုအားအုတ်ခဲဖြင့်ထုမူ့ဖြစ်ပွား ဟင်္သာတမြို့ ကနောင်စုရပ်ကွက်တွင်စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ အမျိုးသားတစ်ဦးကဝင်ရောက်ဖျန်ဖြေသည့်အသက်(၈၀)နှစ်အဖွားအိုအားအုတ်ခဲဖြင့်ထု ၁၀တန်းကျောင်းသူအား ဓားဖြင့်ထိုးမူ့ဖြစ်ပွား…. ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့ ကနောင်စုရပ်ကွက် ပဒေသာလမ်းတွင်(28-7-2019)နေ့ ညနေ ၆နာရီအချိန် ဦးစံရွှေနေအိမ်ရှေ့၌ မြဝတီရပ်ကွက်နေထိုင်သူ ဝင်းဗိုလ်သည်ဆဲဆိုနေစဉ်….. ဦးစံရွှေ၏တူဖြစ်သူ အောင်ကိုမင်းမှခြံဝသို့ထွက်လာပြီးမဆဲရန်ပြောဆိုရာစကားများရန်ဖြစ်၍ ဝင်းဗိုလ်မှလက်ထဲတွင်ကိုင်ထားသည့်သံတုတ်ဖြင့်….့ ရိုက်သဖြင့်လုံးထွေးနေစဉ် မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အဖွားဖြစ်သူဒေါ်သန်းစိန် အသက်(၈၀)နှစ်မှဝင်ဆွဲ၍ဖျန်ဖြေခဲ့ပြီး ဦးခေါင်းတွင်ဒဏ်ရာရရှိသွားသောအောင်ကိုမင်းအားတွဲ၍နေအိမ်သို့ပြန်စဉ် […]
ဦးပိန်တံတားတွင် တိုင်ကိုမှီကာဓါတ်ပုံရိုက်စဉ် ပြုတ်ကျပြီး ရေနစ် သေဆုံး ..
ဦးပိန်တံတားတွင် တိုင်ကိုမှီကာဓါတ်ပုံရိုက်စဉ် ပြုတ်ကျပြီး ရေနစ် သေဆုံး .. မန္တလေး ၃၀ ဇူလိုင်…. ဦးပိန်တံတားတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး တိုင်ကိုမှီကာဓါတ်ပုံရိုက်စဉ် ပြုတ်ကျပြီး ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည် ….. ။ မန္တလေးမြို့ တောင်သမန်အင်း ဦးပိန်တံတားပေါ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး တံတားတိုင်ကိုမှီကာ ဓါတ်ပုံရိုက်စဉ် ပြုတ်ကျပြီး ရေနစ်သေဆုံးမှု ယနေ့မွန်းလွဲ […]
တိုက်ခန်း ၄ လွှာထိ သူခိုးဝင်ရောက်ပြီး ပစ္စည်းယူ၊ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
တိုက်ခန်း ၄ လွှာထိ သူခိုးဝင်ရောက်ပြီး ပစ္စည်းယူ၊ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား မိမိနေအိမ်တိုက်ခန်း လုံခြုံရေး ဂရုစိုက်ကြပါ။ကျနော်တို့ တိုက် ၄ လွှာမှာ သူခိုးဝင်ပြီး လူသတ်သွားပါတယ်။ မနက် ၄ နာရီမှာ နောက်ဖေးပြတင်းပေါက်က ဝင်လာပြီး ယောက်ကျား ကို ဓားနဲ့ ထိုး အသေသတ်ပြီး မိန်းမ […]